रातो स्थलहरू हातबाट उत्पन्न धेरै कारण कारण हुन सक्छ। यो सधैं छैन भनेर ट्रिगरहरू हानिरहित छन् भने हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, विशेषज्ञहरु राम्ररी हात को छाला सम्बन्धित र सबै केहि पनि सानातिना परिवर्तन बेवास्ता सुझाव। त्यसैले तपाईं कुनै पनि गम्भीर रोग रोक्न सक्छ।
रातो स्थलहरू हातमा मा अक्सर तापमान फरक गर्न छाला प्रतिक्रिया को परिणाम हो। यो घटना अक्सर हुन्छ हिउँदमा, पन्जा बिना बाहिर जाँदै गर्दा (वा पन्जा, तर जब धेरै चिसो)। यसबाहेक, छाला चिसो पानी संग सम्पर्क मा प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ किनभने। यस्तो अवस्थामा, मुख्य कुरा - सानो-कैलिबर जहाजहरु गर्न क्षति को स्तरमा हात supercool छैन। अन्यथा पछि औँलामा कारण बिगडा रगत आपूर्ति गर्न संवेदनशीलता गुमाउन सक्छ।
जब overcooling प्रकाश झुनझुनी महसुस आफ्नो हात माथि RUB पर्छ। यो रक्त को रिकभरी एक चिन्ह हो। Trituration मसलाको वा FIR को आवश्यक तेल समावेश क्रीम प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको।
हातमा रातो स्थलहरू जोखिम र उच्च तापमान एक परिणाम हुन सक्छ। यस मामला मा हामी विभिन्न डिग्री को बल्न कुरा छैन। हातमा रातो स्थलहरू अक्सर तात्दै फलस्वरूप उत्पन्न। यस मामला मा, यस्तो प्रतिक्रिया vasodilatation र छाला सतहमा रगत को एक भीड कारण छ। यो अवस्था रबर पन्जा मा गंभीर लामो समयसम्म काम विकास गर्न सक्नुहुन्छ। छाला को लागि जो मामला मा कुनै हावा जो तात्दै गराउँछ, आपूर्ति गरिएको छ। यसबाहेक, राता उत्पन्न हुन सक्छ, र Sunbathing प्राप्त गर्दा वा तातो पानी लामो समयसम्म जोखिम द्वारा। यस्तो अवस्थामा क्रमिक ठंडा हात सिफारिस भने। कुनै पनि मामला मा discontinuity जहाजहरु जोगिन गर्न चिसो पानी वा हिउँ तिनीहरूलाई डुबाउनु हुँदैन। शीतल बिस्तारै गर्नुपर्छ। यो सुन्दर स्नान मा हात dipping गर्दा सबैभन्दा कोमल तरिका हो। यो एक टकसाल जलसेक, र समुद्र नुन थप्न सिफारिस गरिएको छ। यसरी, यो हात मा रातो स्थलहरू हटाउन मात्र होइन, तर पनि तात्दै प्रक्रिया हराएको पोषक को राशि पुनर्स्थापना गर्न सम्भव छ। यो प्रक्रिया RUB गर्नुपर्छ पछि (चिल्लो मालिश आन्दोलनहरु) मइस्चराइजिंग बेहोशि औषधि।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ छाला यी मतभेद धेरै प्रतिकूल प्रभाव छ। बाहेक को पाठ्यक्रम, भिन्नता स्नान। तिनीहरूले त्यसको विपरीत, छाला मा रक्त प्रवाह र चयापचय को बहाली गर्न एकदम योगदान।
हात मा रातो स्थलहरू उत्पन्न र थप गम्भीर कारण हुन सक्छ। यी विशेष मा, भडकाऊ रोगहरु समावेश गर्नुपर्छ समावेश।
छाला, राता खुजली र सुनिंनु सँगसँगै, एक एलर्जी प्रतिक्रिया को संकेत हुन सक्छ। यो एक त्वकरोग परामर्श गर्न आवश्यक छ। पछि उनलाई सम्पर्क हुँदैन को allergen पहिचान गरेर। बारम्बार stimuli स्वच्छता उत्पादन, हो लाँड्री डिटर्जेंट, , औषधी साथै केही खाद्य उत्पादनहरु र, केही अवस्थामा। कारण ज्ञात छ भने, खुजली राहत र स्टार्च र (साधारण बाहिर हुन सक्छ) चामल देखि मास्क मदत गर्नेछ घरमा अवस्था कम chamomile। तयार धन kneaded गर्नुपर्छ आम यसलाई मा लैवेंडर आवश्यक तेल को केही घटेको थप्न खट्टा क्रीम को स्थिरता जस्तो।
कारण राता र छाला रोग (lichen उदाहरणका लागि,) हुन सक्छ। यस मामला मा, उदाहरणका लागि, लोशन निकै स्थिति झनै चर्काउने, रूपमा प्रयोग, आफ्नै उपचार छनोट छैन। shingles को समसामयिक र सही उपचार को अभाव मा शरीर को एकदम व्यापक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न सक्नुहुन्छ।
Preeclampsia: यो के हो? लक्षण
हृदयको बाँया ventricle को Diastolic रोग। विवरण। उपचार
एक नवजात को ओठ मा एक फफोला पत्ता? नआत्तिनुहोस्!
Mammography - एक सर्वेक्षण लागि छ? एक mammogram कसरी सञ्चालन गर्ने?
अवधारणा, विषय, रूपहरू, प्रकारहरू, सिभिल प्रक्रियाको समस्याहरू। सिभिल प्रक्रिया हो ...
किन एडी दरार? कारण र समाधान
बर्कले र Hume को आत्मपुरक idealism
"किया-सूरत ': लोकप्रिय कोरियाली कार को प्राविधिक विनिर्देशों